June 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
Bankiga Adduunka oo $40 milyan Soomaaliya u ansixiyay si ay ula dirirto ayaxa
June 30, 2020 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Bankiga Adduunka ayaa $40 milyan u ansixiyay Soomaaliya si ay uga caawiso dagaalka ka dhanka ah ayaxa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay deyn-bxiyaha maanta oo Talaado ah. “Ayaxa ayaa si daran u […]
Baarlamaanka Puntland oo dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho
June 29, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubna ka ah Federaalka. Kadib kulan uu ku yeeshay Garoowe maanta oo Isniin […]
COVID-19 PANDEMIC IN SOMALIA: A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE
June 28, 2020 Puntland Mirror 0
Introduction The Covid-19 in Somalia is part of the worldwide pandemic of the Coronavirus disease of 2019 which originates from China and reached Somalia through Europe and Arabian Gulf. The first case of Covid-19 in […]
Madaxweynaha Puntland oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolka Mudug
June 27, 2020 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah Cabdiladiif Muuse Nuur oo loo yaqaan Sanyare u magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka Mudug, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada. […]
June 26, 2020 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Puntland iyo Galmudug ayaa isku afgartay in ay ka wada shaqeeyaan arrimaha ammaanka, dib u sheesiinta, iyo xoojinta siyaasadda iyo dhaqaalaha, kadib kulan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maanta oo Jimce ah. […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa maanta oo Jimce ah Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Qoor-Qoor ku soo dhaweeyay madaxtooyada Gaalkacyo. Labada masuul ayaa la filayaa in ay ka wadahadlaan arrimo kala duwan oo ay […]
Madaxweynaha Puntland oo tababar u soo xiray cutubyo katirsan ciidanka badda
June 25, 2020 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah tababar u soo xiray cutubyo katirsan ciidanka badda. Cutubyadan oo katirsan ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa muddo lix bilood ah tababaro […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada in ay ka soo qeybgalaan shir ka dhici doona Muqdisho. Shirka ayaa qabsoomi doona inta u dhaxaysa 5-8 bisha July, […]
June 23, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay banaanka […]
June 21, 2020 Puntland Mirror 0
Qardho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay maamulka Somaliland in ay si ka baxaan dhammaan deegaanada gobolada Sool iyo Sanaag ee ay qabsadeen. Isaga oo ka hadlayay munaasibad lagu soo xirayay […]
Military standoff between Puntland and Somaliland over Tukaraq enters four month
Garowe-(Puntland Mirror) The military standoff between Puntland and Somaliland over Tukaraq village, now entering into its four month. Diplomatic efforts to ease the dispute had failed, sources close to the matter told Puntland Mirror. According [...]
Diyaarado dagaal oo duqaymo la eegtay saldhigyada Al-Shabaab ee gobolka Shabeelaha Hoose
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida iska leh ayaa duqaymo culus ka geystay deegaanka Toora-toorow ee gobolka Shabeelaha Hoose, sida ay sheegayaan dadka deegaanka. Diyaaradaha ayaa bartilmaameedsaday saldhigyo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku [...]
Washington-(Puntland Mirror) Xoghayaha Gaashaandhiga Mareykanka Jim Mattis ayaa shalay oo Jimce ahayd sheegay in uu ku rajo weynyahay kor u qaadista isla xisaabtanka Soomaalida ee ku saabsan qeybinta caawimaada Mareykanka ee ciidamada qalabka sida ee [...]